Olee Otú M Pụrụ Tinye sere iPod Mfe
> Resource> iPod> Olee otú iji Easily Tinye sere iPod
Ọ ga-abụ oké obi ụtọ na-ege ntị music na gị iPod na mgbe ụfọdụ nwere ike ị chọrọ ndị dị otú ahụ dị ka ndị dị ike na-ele artwork mgbe na-ege. Ọ bụ Otú ọ dị, ọ bụghị otú ahụ mfe dị ka ị na-eche ka nwere artwork maka gị niile songs synced si iTunes. Naanị ụfọdụ songs na-akpaghị aka na-egosipụta artwork, ndị ị zụrụ si iTunes ma ọ bụ ndị ọzọ music ụlọ ahịa. Ezie na ndị ọzọ songs ịdekọrọ site weebụsaịtị ma ọ bụ bibiri si CD nwere ike na-efu artwork.
Na-arịa ọrịa ezu nke ị na-elele ndị isi awọ icon parading gafee gị iPod? Anyị ga-egosi gị otú ị chọta artwork-- na ụzọ dị mfe. The Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) bụ ihe na-atụ aro ya. Nke a na usoro-akpaghị aka okụt artworks maka gị niile songs na iTunes na i nwere ike embed artworks ka ọ bụla music faịlụ. Mgbe ahụ mmekọrịta na music gị iPod na artwork ga-egosi mgbe ị na-egwu music. Ka nwere anya na otú mezuo nke a n'okpuru.
Download a omume na wụnye ya na gị Mac. Mgbe ị na-emeghe ya mgbe echichi, ọ ga-akpaghị aka iṅomi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ịgbakwunye egwu niile na. Na usoro ihe omume ga-eme scanning oge ọ bụla ị na-emeghe ya.
Gaa nkụnye eji isi mee nke usoro ihe omume ma na-achọta a iṅomi bọtịnụ. Mgbe ahụ tinye akara checkbox nke Chọọ maka unidentified Songs na pịa iṅomi bọtịnụ iji malite usoro nke artwork Inweta. Ndị ọzọ ozi dị ka omenkà, track aha na ọbụna lyrics pụkwara ịchọta n'ụzọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị tinye akara checkbox nke Chọọ maka duplicated Songs, a usoro nwekwara ike eme oké ọrụ inyere gị aka ịchọta duplicates na iTunes.
3 Embed artworks ka music faịlụ
Pịa a song na-ahụ ya artwork na kọlụm na nri nke isi window. I nwekwara ike ego ozi ndị ọzọ wee pịa Mee bọtịnụ embed niile ozi na music faịlụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe artwork nke music, dị nnọọ pịa Dezie icon na nri n'igbe na ịdọrọ a Obodo image ka album nkà ebe. Mgbe ahụ ọ mere.
4 mmekọrịta songs gị iPod
Ugbu a, i nwere ike mmekọrịta niile songs ka iPod dị ka ị na-emekarị na-eme. Ikwunye na gị iPod ka Mac kọmputa na jikọọ na iTunes. Mgbe nyefee ọkacha mmasị gị songs ka iPod.
Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Ị kwesịrị ị na-enye ya a ogbugba. Mgbe ahụ ị pụrụ nwere oké iPod n'ọbá akwụkwọ na-enwe na ọ laa.